Home News Maxaa ka Taagay Maanta Magaalada Boosaaso??
Maxaa ka Taagay Maanta Magaalada Boosaaso??
Howlgaladan oo ay sameynayaan Ciidanka Amaanka ee dowladda Puntland ayaa waxa ay ka socdaan xaafadaha ay ka kooban tahay Degmada Boosaaso.
Ciidanka dowladda Puntland gaar ahaan kuwa magaalada Boosaaso, ayaa guri guri u baaraya, waxaana shacabka ay weydiinayaan aqoonsi iyo cida taqaana, sida uu soo sheegayo wariye ku sugan Magaalada Boosaaso.
Saraakiisha Ciidamada Amniga Boosaaso ayaa sheegaya in ujeedka Howlgaladan ay yihiin sidii ay u sugi lahaayeen Amaanka guud ee Magaaladaasi iyo sidii loo soo qab qaban lahaa raggii ka dambeeyay dilalkii dhowaan ka dhacay Magaalada Boosaaso.